Vacuum yekuunganidza ropa vacuum yakaipa inomanikidza kuunganidzwa kweropa, kubuda kwehuwandu hukuru hwemidziyo yemagetsi uye kuongororwa kwazvino nezvekurapa kweropa, kwete chete hunyanzvi hwekuunganidza ropa rinodikanwa, asiwo zvinodikanwa zvekuunganidzwa kweropa, zvino chii pasi mavara akasiyana eheti anomiririra?
1. Tsvuku tsvuku: yakajairika serum chubhu;
2. Orange cap: inokurumidza serum chubhu ine coagulant muropa rekuunganidza tube kuti isimudzire maitiro ekuora. ;
3. Chifukidziro chetsvuku chegoridhe: inert yekuparadzanisa glue uye coagulant tube; inert yekuparadzanisa glue uye coagulant mumiririri inowedzerwa muunganidzwa weropa chubu;
4. Green cap: Heparin anticoagulant chubhu, ine heparin yakawedzerwa muhubhu yekuunganidza ropa;
5. Chiedza chakasvibirira cap: Plasma yekuparadzanisa chubhu. Heparin lithium anticoagulant inowedzerwa mukati meiyo inert kupatsanura rabhahubhu kuti izadzise chinangwa chekukurumidza kupatsanurwa kweplasma;
6. Purple cap: EDTA anticoagulant chubhu, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA, huremu huremu 292) uye munyu iwo ari amino polycarboxylic acids anogona kunyatsoteedzera calcium ion mumasampuli eropa. Kubata calcium kana kubvisa iyo calcium calcium saiti ichavhara uye kupedza endo native kana exo native coagulation process, nekudaro kudzivirira samples yeropa kubva mukuora.
7. Chiedza bhuruu cap: sodium citrate coagulation bvunzo tube, sodium citrate inotamba chinzvimbo cheanticoagulant kunyanya kuburikidza chelation ine calcium ions mumasampuli eropa.
8. Yakasviba yekufukidza musoro: sodium citrate ropa sedimentation bvunzo tube. Iko kusangana kwe sodium citrate inodikanwa pakuongororwa kweropa sedimentation ndeye 3.2% (yakaenzana ne1.109mol / L) uye chiyero cheanticoagulant kune ropa ndi1: 4.
9. Grey cap: Potasium oxalate / sodium fluoride, isina simba anticoagulant, inowanzoshandiswa mubatanidzwa ne potassium oxalate kana sodium iodate. Icho chengetedzo yakanaka yekutsunga kweropa glucose, uye haigone kushandiswa kugadzirira kweurea nenzira yerease, kana pakufunga kwe alkaline phosphatase uye amylase.
Pamusoro pekurongeka kwekuunganidzwa kweropa uye kugovera kweropa machubhu mazhinji, kana uchishandisa girazi rekuyera chubhu: serum tube isina anticoagulant, sodium citrate anticoagulation test tube, imwe anticoagulant test tube; Kugadziriswa kwemapurasitiki ekuedzwa epurasitiki: ropa tsika tsika bhubhu (yero), sodium citrate anticoagulant bvunzo machubhu (bhuruu), seramu machubhu aine kana pasina ropa coagulation activators kana kupatsanurana nejeri, heparin tube ine kana isina gel (girini), EDTA anticoagulant chubhu (yepepuru) ), eropa glucose decomposition inhibitor test machubhu (grey).